I-MSK-Tianjin-Ukusika iTekhnoloji ye-CO., LTD
Twist ukuzama ukuzama
Indawo yokuphelisa indawo yeT
Intloko yeFlat End Mill
Impumlo Round Milling mgawuli
Wokugaya Isixhobo Holder
Yasekwa ngonyaka ka-2015, i-MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd ikhule ngokuqhubekekayo kwaye yadlula i-Rheinland ISO 9001 yokungqinisisa.
Ngeziko laseJamani leSACCKE lokugqibela lokusila amaziko ama-axis amahlanu, iZOLLER yaseJamani iziko lokuhlola izixhobo ezithandathu, umatshini wePALMARI waseTaiwan kunye nezinye izixhobo zokuvelisa eziphambili, sizibophelele ekuveliseni izixhobo ezikumgangatho ophezulu, ezifanelekileyo nezisebenzayo ze-CNC.
Ubungcali bethu kuyilo kunye nokuveliswa kwazo zonke iintlobo zezixhobo zokusika ze-carbide eziqinileyo: Ukuphelisa amatye okusila, i-drill, i-reamers, iitephu kunye nezixhobo ezizodwa.
Ifilosofi yethu yeshishini kukubonelela abathengi bethu ngezisombululo ezibanzi eziphucula ukusebenza koomatshini, zonyusa imveliso, kwaye zinciphise iindleko. Inkonzo + Umgangatho + wokuSebenza.
Iqela lethu labacebisi likwabonelela ngemveliso yokwazi, kunye noluhlu lwezisombululo ezibonakalayo kunye nezidijithali zokunceda abathengi bethu bahambe ngokukhuselekileyo kwikamva lomzi mveliso we-4.0.
Thatha indlela ebonakalayo yokusebenzisa amanqanaba aphezulu obuchule bokusika isinyithi ukoyisa imingeni yabathengi. Ubudlelwane obakhelwe kukuthenjwa nentlonipho kubalulekile kwimpumelelo yethu. Sisebenza ngokusondeleyo nabathengi ukuqonda iimfuno zabo.
Ngolwazi oluthe kratya kuyo nayiphi na indawo yenkampani yethu, nceda ujonge indawo yethu okanye usebenzise icandelo lokunxibelelana nathi ukufikelela kwiqela lethu ngokuthe ngqo.
Sinabasebenzi abangaphezu kwama-50, iqela leenjineli ze-R & D, iinjineli eziphezulu zobuchwephetsha ezili-15, ukuthengiswa kwamazwe aphesheya kwe-6 kunye neenjineli zenkonzo emva kokuthengisa.